Barbarkay ka Baxdaa Waa Bakayle Qaleen- Ifafaalada Guulaha Degmada Saylac iyo Lughaya ee Gobolka Awdal | lughayanews
Degmada Lughaya ayaa wariyaha Lughaya news kasoo gudbinayaa ina ay magaaladu degan tahay kadib markii khaakhuula galay maalintii doorashada ka horaysay. Halkaana uu ku qudhwaayey geesigii dhaliyarta ilaahay ha u naxariistee iyo marxuun dhaawac ahaa oo markii danbe geeriyooday.
Doorashadan oo guud ahaan deganayd marka laga reebo askariga xukuumada ee shacabka rasaasta hoos ugu dhigay oo imika lasoo xidhay lagana qaaday qorigii. Dawladuna ku balan qaaday inay baadhitaan ku samayso wixii dhacay maadaama oo uu ahaa askari shaqaale ah.
Degmada Lughaya iyo Saylac oo labaduba ka tirsan Awdal – marka laga yimaado gobolada beebeen ta ah; waa labada degmo ee ugu waawayn gobolka Awdal xeebihiisa ayaa markii ugu horaysay si toos ah looga codeeyey shaqsiga halka doorashooyinkii hore maamulka Somaliland soo dooran jiray cida maamulaysa magaalada oo hab xisbi loo codayn jiray arinatan ay keentay in Xukuumada Jabuuti ay 8 xildhibaan Sharafeed Somaliya ka qaadatay iyo hal kursi oo Somaliland ah – ayna ku loolanto gobolka Awdal si ay sumcada Ismail Cumar Geele loo ilaaliyo oo Non-Appose kusoo bixi jiray ilaa 1960-kii.
Xeebaha gobolka Awdal oo xukuumada Jabuuti khaakhuul faro badan ka waday oo dad xitaa afsoomali ku hadlayn la keenay hadana waxay wararku sheegayaan inayna waxba ka tarin cadadka cod bixiyayaasha u dhashay Saylac iyo Lughaya oo aad u diyaarsanaa una foojignaa awgeed.
Dadkan lasoo daad gureeyey ayaa jiritaanka Somaliland hoos u dhigay iyo “territorial Integrity”-ga Somaliland. Ismacil cumar Geele markuu doorashada shacabkiisa ugu yeedhay reer Somaliland kamay codayn laakiin waxa nasiib daro ah Ismacil oo Somaliya ku loolamaya in maamulka Somaliland u ogolaado inuu halkan ka codeeyo. Taasina ay tahay weerar cad oo jiritaanka Somaliland lagu soo qaaday. Xeerka doorashada ee qornaana nmaanta wixii ka danbeeya la badalo.
Shcabka Awdal ee reer Saylac oo ah dad aad u dulqaad badan ayaa u saamaxay in maamulka Somaliland ku takri falo jiritaanka iyo sharafta jiritaanka iyo sugida xuduudaha gobolka Awdal. Arintaasina ay soo dhamaan doonto marka ay soo shaac baxaan natiijada runta ah ee degaanku.
Wixii la sugaaba waa natiijada doorashada degaanka ee gobolada dalka oo u baahan in wax wayn laga badalo si sharafta dalku usoo noqoto. Shaqsigii degan uunbaa codayn kara isna soo sharixi kara. Halka ay imika ka tahay ninkii degan 3 sano ayaa isa soo sharixi kara ninkii u dhashay ama nin qabiilkiisa u dhashayna ha codeeyo, hana lagu celceshado bilaa diwaan galin. Waa in ninkii u dhashay iyo ninkii degani ay codeeyaan shacabkana la qoraa.
Filed under: News2 | Tagged: Awdal, lughaya, Saylac |
« Doorashada Degaanka Somaliland oo La Filayo Natiijadii Natiijada Degada Lughaya oo So Baxday “New City Council” »
Omer Fahiyeh gadhcase, on November 30, 2012 at 12:14 pm said:
Halkii haadka lahayd iyo halkii haadka lahayd iyo habaqooyin dushood waad ka soo hoyataayee ku hadaafi galbeed.
Beeni raad ma leh run allow ha moogaan.
Ninkii xasad iyo xumaani ku nacsiiso marke dambe run buu kuu jeclaan, beeshaydu fadhigaa fadhi ha uga noqooto nolosha iyo awooda midigtaa lagu qaata ee iyadoo socota kuuma timaado mar haday reer Djibouti cadayn kari waayeen inay Saylac Djibouti iyo shiniileh ka tirsantahay waxa ii bilaabantay inaan cadeeyo iyo Djibouti Saylac ka tirsantahay ayna tahay dhul horay la iiga dhacay.
Cumar Sultaan Caateye Sultaan Fahiye Gadhcase